Izinkakha zikamaskandi zicikwa wuhlelo lwesithembu
THOKOZANI 'Somnandi' Langa
BONGIWE ZUMA | March 23, 2020
SEKUTHUKUTHELI-SE nezinkakha zabaculi bamaskandi ukuvela kwamavukana alo mculo ohlelweni lwesithembu, uMnakwethu kwiMzansi Magic.
Laba baculi abangadumile kangako, bavela kulolu hlelo njengabantu abasazipatanisela nabafuna isithembu kodwa okungacaci nezizathu zabo. Okucike kakhulu labo qolothakamango nababukeli, ngukuqubuka kwamahlebezi okuthi basuke belingisa labo maskanda abasuke bezocela ukufunelwa isithembu nguMusa Mseleku.
Abaculi asebenamava kule ndima bathi kuyihlazo lokhu abakubona kulolu hlelo ngoba kubaveza njengezehluleki, abantu abangabahloniphi abesifazane, abangalazi isiko nabangacabangi izinto eziphusile.
UMfiliseni Magubane uthe ayikho into emcasula njengalolu hlelo ngoba sekuze kubukeka sengathi abantu bamaskandi benza izinto ezibhedayo. Uthe ukulokhu kuvela abantu abathi bacula umaskandi kuphela, kwehlisa ngisho isithunzi somculi kubukeke sengathi kabanazo izifiso ezakhayo nezokuzithuthukisa empilweni.
Ngokusho kwakhe, kade efele ngaphakathi ngokwenzeka kulolu hlelo ngoba alwakhi, libukela phansi abesifazane ngendlela esicelwa ngayo lesi sithembu.
“Nenze kahle nayibheka le nto yabantu, abahlekisa ngesintu nesiko. Siwusebenzele umculo wesintu kodwa bona sebesiveza njengabantu abangenanqondo. Abantu besifazane bayahlonishwa, awuthathi isithembu sengathi uthenga izimbuzi ozozifuya.
“Okungicasulayo, bonke laba bantu, bavela njengezehluleki zabaculi abangazi nokuthi basithathelani isithembu. Kunezinto eziyichilo ezihlambalaza umndeni, isigodi nomuntu othandana naye,” kusho uMagubane. UThokozani “Somnandi” Langa naye onesithembu samakhosikazi amabili aziwayo, uthe akafuni ukuphawula agxile esithenjini ngoba kuzoba sengathi uzikhulumela yena. Uthe isithembu nesintu ngeke wakuhlukanisa ngoba kuyisiko futhi elihlonishwayo. Ukuvela kwabantu abamnyama abalaziyo isiko ukubona njengehlazo elenza ngisho indima kamaskandi ibukelwe phansi .
“Ukube kuya ngokwami ngabe sinebhodi elinabantu abacula umaskandi abazocubungula konke okwenziwa bese kufakwa umaskandi. Abantu abaningi bangosomathuba abafuna udumo nokuzuza ngomaskandi bese kwenziwa sengathi abakwazi ukuzicabangela abanikazi bawo. Nabo abaculi abasilandelayo ngiyabagxeka ngoba iningi labo lisibukela phansi, liyadelela, kaliboniseki. Akukho okungashintsha uma beziphethe ngalolu hlobo, besiqhatha nabantu ezinkundleni zokuxhumana, sigcine sesithukwa sibadala,” kusho uSomnandi.
UShwi wodumo lukaShwi Nomtekhala, uthe uzwile ngalolu hlelo kwamxaka ukuthi yisithembu esinjani esicelwa kwithelevishini? UHhashi Elimhlophe uthe naye ulizwa ngendaba lolu hlelo, akakaze alubuke futhi akasiboni nesidingo sokuzikhathaza ngalo.